Mabhodhoro egirazi anogadzirwa sei, iwe unoziva?
Isu tinowanzoshandisa ese mabhodhoro egirazi muhupenyu hwedu, girazi bhodhoro rakanaka uye rinoshanda, rakada nekristaro yakajeka kuonekera, uye rinogona kushandisa zvizere iro rakaoma uye rakasimba muviri zvimiro. Asi, unoziva sei iro girazi bhodhoro rakagadzirwa? Chigadzirwa ...
Nei Kune Mabhonzo Mugirazi Riri Kuridzwa Nemaoko?
Ichi chigadzirwa chinofuridzirwa nemaoko, maitiro ayo anosarudza zvivakwa zvacho. Mukugadzirwa kwegirazi rakagadzirwa nemaoko, girazi rinopisa rinoyerera zvishoma nezvishoma, uye mweya uri pakati pemabhuru egirazi unozogadzira matema nekuti haugone kuyangarara kubva pamusoro. Vanyori vanoshandisa matema kuburitsa ...
Nezve COVID-19 Vaccination
Iyo COVID-19 ichiri mudenda repasirese izvozvi, nyika yedu yakawana mibairo yakanaka mukudzora denda, rakagadzirwa kuti rive mushonga wevose ikozvino, Kuvandudza hutachiona hwenyika, Yekudzivirira nhanho yakakosha mune yazvino denda rekudzivirira uye rekudzora basa, Iri zvakare inoshanda nzira ku ...
ne admin pane 21-04-24
2021-4-22 ， Raive zuva rakabatikana paChengfeng Fekitori, kunze kwemaodha akajairwa, ezvekutakura zvinhu zvevatengi, Tiri kumhanyisa kunoshanda siku nesikati, tapedza girazi reKorea mug mug order kare, zvakare takatakura 20ft nenguva, uye isu takatakura maviri 40HQ magirazi maviri emadziro eGerman mutengi nezuva rimwe chete. ...
About IS muchina wemabhodhoro egirazi
Muna 1925, injinjini yeHartford Empire Ingle yakagadzira muchina wekugadzira mabhodhoro. Bhodhoro rekugadzira muchina unoumbwa nezvikamu zvakazvimirira zvakati wandei, uye chikamu chimwe nechimwe chinogona kuzvimiririra kuita mashandiro ekugadzira mabhodhoro. Saka kunyangwe kana iwe uchida kuchinja iyo mold, iwe chete n ...
Mazuva ese-anoshandisa girazi anotora chikamu chikuru chemusika nekuchengetedza kwayo uye kugadzikana, uye zvinonetsa kutsiviwa nezvimwe zvinhu
1) Girazi rine yakakwira makemikari kugadzikana. Segaba rekudya uye chinwiwa girazi, zvirimo hazvizoshatiswa; sekushongedzwa uye zvinodikanwa zvezuva nezuva, hutano hwemushandisi hauzokuvadzwa. Semuenzaniso, kana bhodhoro remucheche repurasitiki rikatsamwa pa 110 °, bisphenol A wil ...
Uri kutarisa here kuti ndeapi mabhodhoro egirazi egirazi anogona kuratidza zvirinani uye nekuchengetedza zvigadzirwa zvako? Chengfengglass kuvhura iyo girazi girazi mabhodhoro izvozvi, gamuchirai kubvunza. Mavara makuru anogadzirwa mukati mawo ndeegirinhi, shava, bhuruu uye yakajeka. Mavara akasiyana emabhodhoro egirazi anowanikwa t ...
Bhodhoro muromo une screw kupera
Kubva pamaonero matsva evintner nyowani kusvika kuwaini yakanaka kubva kunzvimbo dzakamisikidzwa, bhodhoro rekopu rinosangana nekuwedzera kunoshamisa mumusika wepasi rose. Chekutanga chakagamuchirwa muNew Zealand neAustralia, iyo screw cap yava kushandiswa kweanopfuura makumi masere muzana emawini kubva kumatunhu aya. Zvinoitika ...
3 kubva ku4 veEuropean vanosarudza girazi
PaZuva renyika dzeMakungwa, Shamwari dzeGirazi irikukoka munhu wese kuti asimudze girazi kuhutano hwemakungwa edu nekutangwa kwemushandirapamwe we'Endless Ocean '. Sekureva kweongororo ichangoburwa yakaitwa nenharaunda yeFafitera yeGirazi, vatatu kubva muvane veEuropean vanoona girazi seanonyanya kufarira gungwa ...